फिफा विश्वकप – १९ दिन बाँकी ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
फिफा विश्वकप – १९ दिन बाँकी !
Posted by Anup Subedi | १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०७:०२ |
१२ जेष्ठ, काठमाण्डौं । डिफेन्डीङ च्याम्पियन जर्मनी अब १९ दिनपछि अर्को युरोपेली राष्ट्र रसियामा सुरु हुने फिफा विश्वकप २०१८ मा उपाधि रक्षा गर्ने सुरमा हुनेछ । यसका लागि प्रशिक्षक जोकिम लोले आफ्नो २३ सदस्यीय अन्तिम टोलीको पनि घोषणा गरिसकेका छन् ।
यसपटक अन्तिम टोलीमा पछिल्लो विश्वकप फाइनलमा उपाधि जिताउन निर्णायक गोल गरेका मिडफिल्डर मारियो गोट्जे टोलीमा अटाएनन । सिजनको अधिकांश समय चोटका कारण बाहिर रहेक गोट्जेले पछिल्लो केहि वर्ष सुखद क्लब सिजन पाएका छैनन् । उच्च स्तरमा लगातार प्रदर्शन गर्न नसकेका कारण टोलीमा अटाउन नसकेको प्रशिक्षक लोले बताए ।
रसियामा हुने विश्वकपमा ३२ राष्ट्र सम्मिलित छन् । प्रतियोगिताको प्रत्यक समूहमा चार टोली छन् र समूह चरणका खेलपश्चात शीर्ष २ टोली राउन्ड अफ १६ मा प्रवेश गर्नेछन् । प्रतियोगितामा सहभागी ३२ मध्ये २० टोलीले यसअघिको संस्करणमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । यसपटक विश्वकपमा दुई टोलीले पहिलोपटक सहभागिता जनाउँदै छन् । आइसल्याण्ड र पानामाको यो पहिलो विश्वकप यात्रा हो ।
यसपटक प्रतियोगिताका खेल संचालन गर्न ११ सहरका १२ रंगशाला प्रयोग गरिनेछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल जुलाई १५ तारिखमा मस्कोको लुझिन्की रंगशालामा हुनेछ । विश्वकप विजेताले सन् २०२१ मा हुने फिफा कन्फेडेरेसन कपमा सहभागिता जनाउनेछ । यसपटक विश्वकपमा भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) को पनि प्रयोग हुनेछ । भारको लागि विशेष रेफ्रीका रुपमा १३ भार रेफ्रीलाई पनि नियुक्त गरिएको छ । प्रतियोगितामा खेल संचालन गराउन फिफाले ३६ रेफ्री र ६३ सहायक रेफ्रीको सुची पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । १४ जुनबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा कुल ६४ खेल खेलिनेछ ।
प्रतियोगिताको आधिकारिक बल एडिडासले उत्पादन गर्नेछ । यसपटक एडिडासले सन् १९७० को विश्वकपलाई आधार मानेर तेल्स्टार १८ नामक बल प्रयोग गर्नेछ । यसबाहेक विश्वकपको मास्कोटको रुपमा जाबिभाका पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
Previousग्राहकको हत्या गरेको आरोपमा नेपाली सेफलाई अष्ट्रेलियामा जेल सजाय
Nextअब नेपालमै स्मार्ट कार्ड !
भारतले एमईपी हटाए लगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको भाउ घट्यो
२८ जेष्ठ २०७४, आईतवार १४:०७
भारतीय दूतावासबाट बस र एम्बुलेन्स प्रदान
१२ माघ २०७४, शुक्रबार १७:४३